I-Sunflower Powder - Ifektri Yomkhiqizi
I-sunflower powder (isiphuzo esiqinile) icebile kakhulu kokuqukethwe kwe-amino acid novithamini E, A, C ngemuva kokukhishwa kanye ne-enzymolysis yebhayoloji. I-sunflower powder (isiphuzo esiqinile) ikakhulukazi sakhiwe ngama-micro-molecule anesisindo esihlobene nesisindo esingaphansi kuka-1000u, okulula ukumuncwa yimizimba yabantu futhi sinezinga eliphezulu lokusetshenziswa.
Ividiyo ye-sunflower powder
Imininingwane ye-Sunflower powder
Igama Product I-sunflower powder
Impilo yokuzenzela yomkhiqizo Akuvulwa izinyanga ezingama-24
Color Mhlophe noma uphuzi ngokukhanyayo
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa futhi kufanele ubekwe endaweni epholile futhi eyomile.
Ngemuva kokuvula, dliwa ngokushesha okukhulu ukuvikela imikhiqizo kumswakama nasekuhlanganiseni.
Aukuphikisana Ukudla, isengezo sokunakekelwa okunempilo, ukudla okusebenzayo.
Yini i-Sunflower powder?
I-sunflower powder (isiphuzo esiqinile) itholakala ku-sunflower powder, ngezinqubo eziningi
njengokukhethwa kwempahla eluhlaza, ukukhipha, i-enzymolysis yebhayoloji, ukomisa nokupakisha, njll.
Ziyini izinzuzo ze-Sunflower powder?
Isiza ukulawula i-uric acid bese ithuthukiswa yi-gout
Iningi lemithi ekhona yokwelashwa kwe-gout ne-hyperuricemia yizidakamizwa zamakhemikhali, ezinemiphumela enobuthi kanye nemiphumela emibi. Ngakho-ke, abacwaningi abaningi ngokwengeziwe bazibophezele ekutholeni izinto ezisebenzayo zemvelo ezinomphumela omuhle wokwelapha nobuthi obuphansi obuvela ezitshalweni zemvelo. Ngokuya ngomtholampilo wokuqinisekisa umuthi wendabuko kanye nocwaningo lwesimanje lwezemithi, ubhekilanga unezinto ezahlukahlukene zokwenziwa kwemithi. Ekucwaningweni kokukhishwa kwe-sunflower, kutholakale ukuthi ukukhishwa kwe-sunflower kunciphisa okuqukethwe kwe-uric acid egazini ngezinga elithile futhi kunomthelela othile wokuvimbela umsebenzi we-xanthine oxidase ku-serum yegundane.
Thola i-prostatitis engapheli ne-prostatic hyperplasia improved
I-prostatitis engapheli ngesinye sezifo ezivame kakhulu phakathi kwamadoda asekhulile naphakathi kwabadala. Iningi leziguli linezimpawu eziyinhloko njengokuchama okunzima, ukuconsa ngemuva kokuchama nobuhlungu bezitho ezingezansi. Ngokwemibiko yephephabhuku lezokwelapha, izinga lokwelashwa lifike kuma-80% phakathi kweziguli eziyi-100 ezibalulwe ngenhla ezelashwa ngomgubo wembali. I-hyperplasia ye-Prostatic nayo iyisifo esingelapheki esijwayele amadoda amadala, izehlakalo zazo eziphakeme ngaphezu kuka-75%. Ngemuva kokuthi iziguli zidle impuphu yembali, kukhona ukuvinjelwa kwe-glandular hyperplasia, ukuncipha kwevolumu eyindlala, nokuthuthuka komsebenzi wokulawulwa kwe-endocrine.
Thola ukuqhutshwa kwesibindi kuthuthukisiwe
Impova yezinyosi inomphumela osobala ku-cirrhosis yotshwala edalwa ukuphuza ngokweqile, futhi ilungisa ukusebenza kwesibindi ngokushesha okukhulu.
Imiphumela ohlelweni lwe-cardiovascular
I-Flower powder icebile ngamavithamini namanye ama-flavonoid compounds, anemiphumela emihle ekuthuthukiseni amandla we-capillary, nokuvimbela nokwelashwa kwe-capillary permeability disorder, i-cerebral hemorrhage, i-retinal hemorrhage, i-hypertension kanye ne-varicosity.
 Ukondleka nokunakekelwa kwempilo ngenxa yempova.
 Isifinyezo sePollen Nutrition and Function.